Doorashada 3 Xildhibaan oo Baydhaba ka dhici doonta 27-ka bishaan – Kalfadhi
27-ka bishaan ayuu Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka shaaciyey iney dhici doonto doorashada 3 Xildhibaan, oo baneeyey kuraas ka tirsan kuraasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Kuraastaas banaan ayey deegaan-doorashadoodu waxay dhamaantood taalaa Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), gaar ahaan magaalada Baydhaba.
“Guddigu wuxuu ku dhawaaqay in uu qaban doono doorashada boos-buuxinta kuraasta ka banaanaatay Golaha Shacabka ee uu deegaan-doorasheedu yahay Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed, laguna qaban doono magaalada Baydhaba” ayey tiri Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Madaxa-banaan ee Qaranka, Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey).
Musharraxiinta kursiga uu horay u baneeyey Xildhibaan Xuseen Cismaan Xuseen ayey Xaliima Yarey sheegtay iney u soo diyaar-garoobaan doorashadaas, oo waqtiga ay dhaceyso ay ku began tahay 12 maalin kadib (27-ka Abriil, 2019). Isla sidaas oo kale ayey Xaliima Yarey fartay odayaasha dhaqanka ee ka midka ahaa 135-tii soo dooratay Baarlamaankii 9-aad iney soo gudbiyaan erygadii dooran lahayd 2 xildhibaan oo kale.
“Wuxuu, sidoo kale, guddigu ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka ee ku jiray liiska 135-ta oday-dhaqameed ee hogaanka dhaqan u ah beelaha ay matalaan kuraastii ay baneeyeen xildhibaan hore Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) iyo Allaha u naxariistee, Xildhibaan hore Axmed Mayow Cabdalla (Korneel Ruush) in ay u soo gudbiyaan Xafiiska Guddiga Doorashiyinka liiska 51-da ergo” ayey tiri Xaliima Yarey.
51-daas ergo waa kuwii dooran lahaa Xildhibaannada ku soo biiri doona Golaha Shacabka, waxaana ay odayaasho haystaan 7 maalin oo kaliya, si ay u soo gudbiyaan ergada laga rabo, oo Xildhibaankii la dooranayaba looga baahan yahay in ay soo gudbiyaan 51 ergo oo mid kasta u gaar ah. Sidaas oo kale ayey Xaliima Yarey fartay musharraxiinta u tartameysa kuraasta ay baneeyeen Lafta Gareen iyo Korneel Ruush in ay warqadahooda musharraxnimo ku soo gudbiyaan 7-aad gudihiis.
Doorashada 3-da Xildhibaan waxay ka dhici doontaa hal maalin magaalada Baydhaba, sida uu sheegay Guddiga Doorashooyinka Madaxa Banaan ee Qaranka. Xaliima Yarey ayaa sheegtay in ay 24-ka bishaan gaari doonaan Baydhaba, ayna hagaajin doonaan hanaanka doorashadaas maalinka ay gaaraan halkaas ilaa 27-ka bishaan, oo ah maalinka ay doorashada xildhibaannadu ka dhici doonto magaalada Baydhaba.
Xildhibaan Aamina: Canshuur ay soo tuugsatay hooyo ilmaheeda iskuulka u diri weysaan qaadanaa!